Ugbo elu ụgbọ elu Britain na London Heathrow na-aga Saint Lucia ịlaghachi mgbe ihe karịrị afọ 30 gachara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ugbo elu ụgbọ elu Britain na London Heathrow na-aga Saint Lucia ịlaghachi mgbe ihe karịrị afọ 30 gachara
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ Lucuc na -agbasa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akụkọ dị iche iche
Ugbo elu ụgbọ elu Britain na London Heathrow laghachi na Saint Lucia Mgbe ihe karịrị afọ 30 gachara
UK bụkarị ahịa ahịa nlegharị anya nke abụọ nke Saint Lucia.
TUI na -enye Saint Lucia ọrụ kwa izu site na Gatwick London.
British Airways nwere ụgbọ elu anọ kwa izu site na Gatwick London na Saint Lucia.
Ọrụ ụgbọ elu British Airways sitere na Heathrow ga -akwụsị na Septemba 4, 2021.
Saint Lucia agbakwụnyela ọnụ ụzọ ọzọ na -aga ebe a na -eweghachi ọrụ British Airways si London Heathrow (LHR) mgbe ihe karịrị afọ 30 gachara. Boeing 777 gbadara na Satọde, Julaị 24, 2021, n'ihe dị ka elekere 5:45 nke mgbede nwere ikike 173, nke ọtụtụ n'ime ha bụ ndị ọbịa.
Site na Gatwick (LGW), Saint Lucia anabatala ụgbọ elu TUI na ụgbọ elu 4 kwa izu na British Airways. UK na-abụkarị ahịa nlegharị anya nke abụọ nke Saint Lucia ma ka ọ dị ugbu a, kwa afọ na-egosipụta uto 4%.
Ndị ọrụ ụgbọ mmiri iri na atọ nke Captain -Peter Williams sonyeere ndị ọrụ nke Saint Lucia Tourism Authority (SLTA) iji nata ihe ncheta nke na -egosipụta akara ngosi ejima mara mma, ahịa niche, na ngwugwu nnabata na -atụghị anya. E nyekwara ndị njem abụọ nwere ihu ọma onyinye mbata.
“Ọrụ ọhụrụ a ewepụtara kwa izu site na Heathrow na -abịa n'oge kwesịrị ekwesị mgbe Saint Lucia na -akụkọta nkwado karịa maka oge ọkọchị na -atọ ụtọ, yana oge oyi na -abịa. Nke a na-egosikwa ọganihu na-aga n'ihu na mgbake nke ngalaba njem, "onye njikwa mmekọrịta ọhaneze kwuru- Geraine Georges.
Ọrụ British Airways sitere na Heathrow ga -akwụsị na Septemba 4, 2021, mkparịta ụka na -aga n'ihu maka ịmaliteghachi n'ọdịnihu dị nso. A na -ahazikwa na ụgbọ elu ahụ ga -abawanye elu ikuku n'oge oyi na iji ụgbọ elu kwa ụbọchị site na Nọvemba si Gatwick (LGW).